🥇 ▷ Xanta: PlayStation All-Stars Battle Royale 2 waxaa lagu sii deyn doonaa PS5! ✅
Xanta: PlayStation All-Stars Battle Royale 2 waxaa lagu sii deyn doonaa PS5!
Waqtiyadi ugu dambeeyay, warar xan ah ayaa ku faafay internetka oo sheegaya in PlayStation All-Stars Battle Royale 2 lagu sii deyn doono PS5. Si kastaba ha noqotee, sida wararka xanta ah ee kale, ciyaartoydu waa inay u tixgeliyaan inay tahay mala awaal saafi ah Waxa kaliya ee aan si rasmi ah loo xaqiijin.
Laakiin ka dib oo dhan, waa maxay ciyaartaani?
PlayStation All-Stars Battle Royale waa ciyaaro taxane ah oo dib loo bilaabay sanadkii 2012 taas oo runtii aan qiran karno inay aheyd guul weyn. Tani waa sababta oo ah ciyaartan waxay ujeedka ugu weyn ee ay tahay inay isu keento dhammaan jilayaasha kala duwan ee cinwaannada Ciyaaraha. Tani aad bay uga farxisaa ciyaartoyga.
Sidaas darteed, marka loo eego waxa shaaca ka qaaday, PlayStation All-Stars Battle Royale 2 waxay lahaan doonaan qaab isku mid ah sida ciyaarta loo yaqaan Super Smash Bros. Waxaa intaas dheer waxaad soo qaadan doontaa jilayaasha ugu waaweyn ee ciyaaraha Playstation-ga oo midba midka kale u dagaallamayo. Sida Kratos, Spiderman, Spyro, Tomb Raider ama xitaa Ratchet & Clank.
Xaqiiqada 4aad: Ciyaar cusub oo taxanaha ah ayaa la siidaayaa goor dhaw!
Xagee ka timid xantaas?
Wararka la isla dhexmarayo ayaa billowday markii qof shaqaale ah oo ka shaqeeya shirkadda Capcom uu internetka ku baahiyay macluumaad fara badan oo ku saabsan istuudiyaha. Markaa waxay ahayd arrin daqiiqado ah illaa ay ku faafay baraha kala duwan.
Taasi waxay dhahday, waxay umuuqataa in Sony ay horayba u hormarin laheyd ciyaarta si ay ugu bilowdo sanadka 2020 PS5 cusub. Oo la siiyaa dhammaan waxyaabaha cusub ee laga hirgalin doono ciyaarta, sida waxyaabo ka kooban, muuqaallo ka wanaagsan ama xitaa jilaayaal cusub, waxaan u qaadan karnaa in ciyaarta ay si wanaagsan ugu soo bixi doonto, sidaas darteedna dhiirrigelin u noqonaysa iibsashada qalabka loo yaqaan ‘console’ cusub.
Marka la soo koobo, wax aan weli laga aqoonin cinwaanka cusub, maxaa yeelay waxba kama soo bixin istuudiyaha. Si kastaba ha noqotee, siidaynta suurtogalka ah ee loo yaqaan ‘PlayStation All-Stars Battle Royale 2 ma noqon doonto wax aan macquul aheyn. Ka dib oo dhan, tani waxay ahayd mid ka mid ah taxanaha ciyaarta ugu xiisaha badan ee Playstation.